Bara uru Atụmatụ na-gị iPhone 7 / iPhone 7s dị ka New
Otu n'ime nsogbu ndị bụ isi na iPhone ọrụ na-eche ihu bụ selata nke software. Nke a bụ n'ezie a n'ezie na-enwekarị nsogbu. Ị nwere ike chọpụtara na gị iPhone ọkọkpọhi iji nwayọọ na iji nwayọọ dị ka ị na-eji ya. E nwere ọtụtụ ihe n'ihi na nke a ma na-abịa ihe ndị kasị nkịtị omume bụ;
The ebe nchekwa nwere ike jupụta na-eme ka ngwaọrụ na-agba ọsọ ngwa ngwa mgbe n'ịrụ ebe nchekwa kpụ ọkụ n'ọnụ omume
Extra software nrụnye nwere ike ime ka gị iPhone ịkụda
N'ime oge gị iPhone pụrụ ịmalite iche na iji nwayọọ karịa nkịtị karịsịa mgbe tụnyere ọhụrụ ụdị.
N'agbanyeghị ihe mere, e nwere ọtụtụ ụzọ i nwere ike na-gị iPhone ịrụ ọrụ dị ka ọhụrụ. Ka anya na ụfọdụ n'ime ndị kasị dị irè n'anya.
1. Nso Down Non-dị oké mkpa ngwa
Nke a bụ ndị kacha ngwọta na ga-arụ ọrụ iji adị n'elu gị iPhone. I nwere ike ime ya site abụọ na ịpị na Home button iji bugote égwu ugbu a na-agba ọsọ. Ị ahụ swipe elu na-emechi ha.
Nanị nsogbu na usoro a bụ na e nweghị ụzọ na-emechi ha niile na otu. Ya mere, a ga-akwadebe na-emefu nnọọ a bit nke oge-eme nke a karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere otutu nke ngwa.
2. Jiri Battery Doctor App ka Reallocate ebe nchekwa
The Battery Doctor App enye gị ohere iji ya One Kpatụ enyem ka reallocate ebe nchekwa na-adị n'elu gị iPhone. A bụ otú ime ya.
Ozugbo ị ebudatara-eji ngwa, ị nwere ike iwunye "Otu Kpatụ enyem" atụmatụ si n'ime ngwa. Dị pịa na "rọketi" akara na n'elu nkuku.
Wụnye One Kpatụ enyem wee pịa na ya ka ọ na-arụ ọrụ ya anwansi.
Ọ ga-ahụ reallocate ebe nchekwa gị na-eme ka gị iPhone ngwa ngwa.
Nanị nsogbu na a nhọrọ bụ na ọ dịghị doro anya ịkpụ nkọwa nke ihe App-eme n'ezie na adị iPhone. E nwekwara ndị na-egosi na Apple bụ megide ngwa na tamper na ebe nchekwa oke. Bụ nke a mere nke a karịsịa ngwa e-efu nke a mgbe na-emekarị nd-oru.
3. Doro Anya Safari Data na Kuki
Ekpocha gị Safari data na kuki ga onwe elu ụfọdụ n'ime ebe nchekwa gị na ya mere adị n'elu gị iPhone. Mepee ntọala ngwa na gbadaa na Safari. Ebe a, họrọ Doro Anya History na Doro Anya Kuki na Data.
E nwere ihe abụọ ọghọm na-eji usoro ihe a. Otu bụ na Safari agakwaghị na-atụ aro URLs gị ma ọ bụrụ na ha na-bookmarked. Nke ọzọ bụ na-ekpocha gị niile data ga-apụta na weebụsaịtị ga-echefu na mmasị gị.
4. Tụgharịa Down Graphics
Ọ bụ eleghị anya na fancy visual mmetụta na-abịa na ọhụrụ gị na iPhone 6s (Plus) nwere ike eme ka ọ akwụsịlata. Ya mere, ọ bụ eleghị anya ezi echiche iji gbatuo ndịna-emeputa. Ka ịgbanyụọ ngagharị, enweta na Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility> Belata Motion na mgbe ahụ setịpụrụ Belata ngagharị bọtịnụ on.
I nwekwara ike dịkwuo iche. Enweta na Ntọala> Ozuruọnụ> Accessibility> Dịkwuo iche na ahụ setịpụrụ Belata nghọta ka on. Nke a ga-gbanyụọ ndabere mmetụta.
Ime nke a nwere ike dịkwuo iPhone si ọsọ site ntakịrị ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma-eme gị ndụ batrị kama.
5. Iji Wondershare SafeEraser
Jiri Wondershare SafeEraser bụ otu n'ime ndị kacha na ụzọ kasị dị irè ọcha gị iPhone na ya mere ọ bịa ọsọ ọsọ. Nke a ngwa-eji ọhụrụ US Military spec n'elu-ede technology ijere ehichapụ data unrecoverable. Ụfọdụ n'ime ya atụmatụ na-agụnye;
The ngwa nwere ike na-adịgide adịgide ihichapu gị iPhone-eme ka ọ mfe n'ihi na ị na-ere ma ọ bụ egweri ngwaọrụ gị na-enweghị nchegbu banyere onwe gị ozi na-n'ime ọjọọ aka
Ọ na-enyere gị iji wepu ehichapụ faịlụ na-adịgide adịgide otú eke a otutu free disk ohere.
The 1-Pịa Hichaa atụmatụ ana achi achi na ngwaọrụ gị na-agba ọsọ na ezigbo gbapụrụ ọsọ site na iwepu junk faịlụ na-enweghị isi ndabere Filiks n'enweghị.
Nzọụkwụ otu: Download na Wụnye Wondershare SafeEraser gị na kọmputa. Na-agba ọsọ usoro ihe omume na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone gị na kọmputa na iji eriri cables.
Usoro ihe omume ga-amalite ịgụ isiokwu ngwaọrụ gị-akpaghị aka.
Nzọụkwụ Abụọ: Ozugbo Doppler zuru ezu. The junk faịlụ ga-egosipụta na ị nwere ike pịa "nzacha na mkpocha" onwe elu ngwaọrụ gị.
Usoro nwere ike iri a mgbe otú ijide n'aka na na-na ekwentị gị jikọọ na kọmputa dị ka ọ Dị Ọcha Up.
Nzọụkwụ atọ: Mgbe usoro zuru ezu, usoro ihe omume ga-egosipụta ozi na dị ohere na otú ọ e ekenyela na gị iPhone.
Ị nwere ike mgbe ahọrọ rescan bụrụ na ị chọrọ a ọzọ nke ọma cleanup ma ọ bụ pịa n'ụlọ na-aga azụ isi window.
> Resource> iPhone> bara uru Atụmatụ na-gị iPhone 6s (Plus) dị ka ihe ọma dị ka New